आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर सबै डाक्टरहरु चकित, रिपोर्टमा यस्तो! – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर सबै डाक्टरहरु चकित, रिपोर्टमा यस्तो!
आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर सबै डाक्टरहरु चकित, रिपोर्टमा यस्तो!
admin November 6, 2020 स्वास्थ्य	0
एजेन्सी । एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जी,वन बाँ,चिर,हे,की थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अ,चा,न,क उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्यान्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । **भिडियो तल क्लिक गरेर हेर्नुस्**
जब उनको स्थिती अस्पताल पुग्यो तब डाक्टर पनि चकित परे र उनीहरुले यो समस्याबारे थाहा पाउनका लागि एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्यो । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्रोमोसोम पुरुषको हुन्छ । यी महिला केहि महिना अघि पेट दुख्ने समस्या लिएर नेताजी सुभाष चन्द्र बो,स क्या,न्स,र अस्पताल गएकी थिइन् ।
उनको उपचार गर्ने डाक्टरले उनलाई कस्तो रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकेनन् ।क्यान्सर अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर अनुपम दत्ता र कन्सल्टेन्ट सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्छर सौमेन दासले उनको उपचार गरिरहेका थिए ।
अहिले महिलाको शल्यक्रिया गरेर चारदेखि पाँच किलोको ट्युमर निकालिएको छ । पूर्ण उपचारका लागि उनको किमोथेरापी चलिरहेको छ र महिलाको हालत स्थिर छ । महिलामा पुरुषको क्रोमोसोम छ तर उनी पूर्ण रुपमा एक महिला हुन् ।
यो कुरा सम्झाउन र स्विकार गर्नका लागि उनको काउन्सिलिङ पनि गरिँदैछ । डाक्टरका अनुसार उनको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, सबै पहिले जस्तै छ । उनको परिवारले पनि यो कुरा बुझ्दै छ । यो एक जेनेटिक डिसअर्डर हो जसले बच्चाको यौ’नाङ्ग र प्रजनन अङ्गलाई प्रभावित पार्छ ।
भर्खरै आयो यस्तो खबर, यसपालिको तिहारमा देउसी,भैलो खेल्नेका लागि ठुलो झट्का ।
भगवान जस्तै श्रीमानलाई सबैले अर्कि बिहे गर अनिता म’र्छे भन्थे, सम्झेर रोइन अनिता (भिडियो हेर्नुहोस)
दु:खद खबर! कोरोना संक्रमणबाट बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञकै निधन
के पुरुषहरू गर्भनिरोधक चक्की खान तयार छन्
ज्यो’तिषशास्त्र अनुसार पिताासँग अनुहार मिल्ने युवती हुन्छन् साह्रै भा’ग्यमानी, जान्नुहोस् यस्ता गुणहरू…
जीप दु’र्घ’ट’नामा २२ वर्षीय टेकमाया र उनका नाबालक छोराको निधन
दुःखद खबर – पोर्चुगलमा एक नेपाली महिलाको कोरोनावाट नि’धन
काम पाइने आशमा दलालमार्फत भि’जिट भिषामा दुबई आउँदै हुनुहुन्छ ? एक पटक अवश्य पढ़नुहोस
जंग’लभित्र तपस्वी रामबहादुर बम्जनको छुट्टै राज, हेरौं प्रहरीले बम्जनको आश्रममा गरेको अ’प्रेसन (भिडियो सहित)